क्यान्सरको उपचारमा सक्रिय दम्पत्ति | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
क्यान्सरको उपचारमा सक्रिय दम्पत्ति Home
10.7K2comments
पहिलो हेराइमा माया बस्छ, त्यो फिल्ममा मात्र हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो रे उनलाई । तर, त्यो आफ्नै जीवनमा लागू भयो । कुरा संवत् २००० सालको हो । सँगै इन्टर्नसिप गर्न गएकी डा. सृष्टि श्रेष्ठलाई देख्नसाथ उनी अर्थात् डा. रोशन प्रजापति मायामा परे । यो कुरा साथीमाझ लुक्न सकेन । एक कान दुई कान मैदान । साथीहरूकै कारणले रोशनको मनको कुरा सृष्टिको कानमा प¥यो । कसैले एक भेटमै मन परेको बताउँदा को केटीले पो विश्वास गर्छन् र ? सृष्टिको हकमा पनि त्यही लागू भयो । अल्लारे केटाहरूले जिस्काउने बहाना खोजेको ठानेर वास्ता गरिनन् । सकेसम्म परै बसिन् । नजिकिनुको सट्टा अझ पर तर्किएको देखेर रोशनले आफूलाई मन नपराएको ठानी चुप लागे । झन्डै एक वर्षपछि संयोगले उनीहरूको पुनः भेट भयो । एकजना साथीको जन्मदिनको पार्टीमा । त्यो दिन पहिलो दिन थियो दुवैजना खुलेर कुराकानी भएको । संयोग नै भन्नुपर्छ त्यसपछिका दिन उनीहरू दुवैजनाले शिर मेमोरियल हस्पिटलमा काम गर्न थाले । भनिन्छ, ‘जोडी माथिबाटै तय हुन्छ ।’ सँगै काम गर्ने अवसरले उनीहरूलाई नजिकमात्र ल्याएन, जिन्दगी सँगै बिताउन सक्ने योग्य जीवनसाथीका रूपमा पनि एक–अर्कालाई महसुस गराउन थाल्यो ।
चाहेको कुरा भन्नेबित्तिकै कहाँ पाइन्थ्यो ? छोरा डा. बनेपछि विवाह गर्न केटी खोजेर तयारी बनाएका बाबुआमालाई आफ्नो छनोटको विषयमा ‘कन्भिन्स’ गराउन निकै गाह्रो थियो डा. रोशनलाई । ‘तर, मैले कन्भिन्स गराएरै छाडें,’ डा. रोशनले छेउमा बसेर मुस्कुराइरहेकी डा. सृष्टितिर संकेत गर्दै भने, ‘उनको र मेरो प्रोफेसन पनि एउटै भएकाले मलाई कन्भिन्स गराउन गाह्रो परेन । समस्यामा त उनी पो परिछन् ।’
त्यतिबेला लभ अफेयर्सलाई परिवार र समाजले त्यति राम्रो मान्दैनथ्यो । कस्तो परिवारको केटा हो ? छोरीले दुःख पो पाउने हो कि भन्ने अनेकौं प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने डर थियो सृष्टिलाई । ‘हाम्रोबारे सामान्य जानकारी पाए पनि घरमा मैले सजिलै कन्भिन्स गराउने अवस्था भने थिएन,’ सृष्टिले भनिन्, ‘एक दिन म बिरामी भएको बेला उहाँले मलाई गरेको फोनवार्ता ड्याडीले सुन्नुभएछ । त्यसपछि भने यो केटाले छोरीलाई खुसी राख्छ भनेर मलाई जानकारी नै नगराई उहाँबारे बुझ्न थाल्नुभएछ ।’
भेट भएको ठीक दुई वर्षपछि दुवै परिवारको सहमतिमा डा. सृष्टि र डा. रोशन २००२ मा वैवाहिक जीवनमा बाँधिए । एक सन्तानको अभिभावकसमेत बनेपछि २००४ मा विशेषज्ञता अध्ययनका लागि दुवै चीन गए । ‘उनले स्त्री तथा प्रसूतीमा मैले क्यान्सर रोग विशेषज्ञता गरेर फर्किएपछि दुवैले क्यान्सर अस्पताल भक्तपुरमा काम सुरु ग¥यौं,’ डा. रोशनले मीठो विगत कोट्याउँदै भने । डा. रोशन क्यान्सर रोग विशेषज्ञ त्यसमाथि रोटरी क्लबमा पनि आबद्ध थिए । क्यान्सर रोगको जनचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर उनलाई सोसल भिजिट गरिरहनुपर्ने हुन्थ्यो । बेला–बेला डा. सृष्टि पनि साथमा जाने गर्थिन् । अस्पताल र घरको एउटा नियमित दैनिकीभन्दा भिन्नै सोसल एट्याचमेन्ट देख्दा डा. सृष्टि अचम्मित हुन्थिन् । ‘हामी त प्रोफेसनलमात्र हुन्थ्यौं, उहाँको बिरामी र समाजसँगको छुट्टै एट्याचमेन्ट देखेर मलाई पनि अंकोलोजीमा सुपर स्पेसियालिटी गर्न एकाएक रहर लागेर पो आयो,’ डा. सृष्टिले भनिन्, ‘त्यसैले एक वर्ष अगाडि गाइनो अंकोलोजीमा सुपर स्पेसियालिटी गरेरै फर्किएँ ।
डा. सृष्टिले अंकोलोजीमा स्पेसियालिटी गरेर आफूलाई खुसीमात्र होइन, सहयोग पनि पुगेको बताउँछन् डा. रोशन । स्तन र पाठेघर क्यान्सरबारे उपचार र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जाँदा बिरामीले खुलेर कुरा गर्न नसक्ने अवस्था थियो । त्यो समयमा फिमेल डा. भएको भए खुलेर कुरा गर्न सक्ने वातावरण हुन्थ्यो भन्ने महसुस बिरामीको भावना बुझेका हुन्थे डा. रोशनले । अहिले क्यान्सरका कार्यक्रम हँुदा महिलामा देखिने क्यान्सरबारे सृष्टिले बिरामीलाई काउन्सिलिङ गर्ने गर्छिन् भने अन्य क्यान्सरबारे डा. रोशनले बुझाउँछन् । ‘अहिले अस्पतालमात्र होइन, फिल्डमा पनि सँगै गएर क्यान्सरका बिरामीको सेवा गर्न पाएका छौं, योभन्दा खुसीको कुरा के हुन्छ र ?’ दम्पतीले भने । परिवारप्रति पनि उत्तिकै जिम्मेवार डा. प्रजापति जोडी व्यस्त जीवनशैलीका बाबजुद पनि हरेक शुक्रवार साँझ भने परिवारलाई छुट्याउँदै आएका छन् । जोडी भन्छन्, ‘अन्य दिन व्यस्तताले परिवारलाई समय दिन नसकिने भएकाले शुक्रवार साँझ र शनिवार प्रायः हामी परिवारसँग रमाइरहेका हुन्छौं । डा. सृष्टिको नजरमा डा. रोशन
परफेक्ट श्रीमान् ।
कुशल पिता ।
लभिङ एन्ड केयरिङ स्वभाव ।
समयसँग आफूलाई चाँडै अपडेट राख्ने ।
हरेक कुरालाई सकारात्मक बाटोबाट हेर्ने बानी ।
रिस कडा छ, त्यो कम भइदिए हुन्थ्यो ।
इन्टरनेटमा धेरै समय बिताउने बानी कम गरे हुन्थ्यो ।
मैले जुन कपडा लगाए पनि केही न केही अब्जेक्सन गर्ने बानी ।
निकै जिद्दी हुनुहुन्छ । गर्छु भनेपछि गर्नैपर्छ, जिद्दी गर्नुपूर्व अरूले किन हुन्न भन्दै छ भन्नेतिर पनि सोचिदिए हुन्थ्यो । फर्मलमात्र डे«सअपमात्र गर्ने खोज्ने ।
डा. रोशनको नजरमा डा. सृष्टि
खाना पकाउन इन्टे«स्टेड छिन्, त्यसैले साथीभाइ आउँदा केही भन्न पर्दैन ।
हामी तीनजना (छोराछोरी र श्रीमान्) कै अभिभावकजस्ती छन् ।
साथीभाइसँग भेटघाट या कुनै ग्यादरिङमा जानुपरे पनि कहिल्यै रोकतोक गर्दिनन्, बरु समयमै तयार भएर निस्कन प्रोत्साहहित गर्छिन् ।
उनलाई घुम्न मन पर्दैन तर पनि मेरा लागि भए पनि कतै जाउँ भन्दा कहिल्यै नाइँ भन्दिनन् ।
असल पत्नीसँगै कुशल आमा र अभिभावक ।
लुगा किन्न साह्रै किचकिचे छिन्, आहा नभनुन्जेल किन्दिनन् ।
झनक्क रिसाउने बानी ।
घरमा सिरियल हेर्दा आफू पनि सिरियस हुने, दुःखको घटना केही आए बिचरा भनेर दुःखी हुने स्वभाव छाडिदिए हुन्थ्यो ।
घरको सरसफाइ गर्नुप¥यो भने हामी तीनजनालाई नै कोठाबाट बाहिर निकाल्ने बानी छ । यो बानी मलाई मात्र होइन, छोराछोरी पनि रिसाएर निस्कन्छन् ।
घुम्न इन्ट्रेस्टेड भइदिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । नाइँ नभने पनि जबरजस्ती हाम्रा लागि गइदिएको हो कि जस्तो लाग्छ । हाम्रो डाक्टर एप (Google Playstore) र (Apple Store) मा पनि उप्लब्ध छ । डाउनलोड गर्नुहोला।
Cayden on Tue, Feb 28 2017 02:56 PM
Most help articles on the web are inaccurate or innroehect. Not this!
Indu Pradhan on Sun, Jan 01 2017 06:56 PM
Nice love story , past n present ta ekdam ramro ,future ajha ramro hos vanne subhakamana...
Bhaktapur Cancer Hospital was established 16 years back asacurative program of Nepal Cancer Relief Society (NCRS). NCRS highly acknowledge the support made by Nepal Government, Rotary...